Stellar စျေး - အွန်လိုင်း XLM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Stellar (XLM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Stellar (XLM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Stellar ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 217 311 865.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Stellar တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Stellar များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
StellarXLM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0992StellarXLM သို့ ယူရိုEUR€0.0845StellarXLM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.076StellarXLM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.091StellarXLM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.895StellarXLM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.63StellarXLM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.21StellarXLM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.373StellarXLM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.132StellarXLM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.139StellarXLM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.23StellarXLM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.769StellarXLM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.534StellarXLM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.4StellarXLM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.72StellarXLM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.136StellarXLM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.151StellarXLM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.09StellarXLM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.689StellarXLM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.56StellarXLM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩117.65StellarXLM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦38.16StellarXLM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.25StellarXLM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.74
StellarXLM သို့ BitcoinBTC0.000009 StellarXLM သို့ EthereumETH0.000262 StellarXLM သို့ LitecoinLTC0.00184 StellarXLM သို့ DigitalCashDASH0.00113 StellarXLM သို့ MoneroXMR0.00114 StellarXLM သို့ NxtNXT7.87 StellarXLM သို့ Ethereum ClassicETC0.0147 StellarXLM သို့ DogecoinDOGE29.94 StellarXLM သို့ ZCashZEC0.00124 StellarXLM သို့ BitsharesBTS3.78 StellarXLM သို့ DigiByteDGB3.25 StellarXLM သို့ RippleXRP0.352 StellarXLM သို့ BitcoinDarkBTCD0.00348 StellarXLM သို့ PeerCoinPPC0.333 StellarXLM သို့ CraigsCoinCRAIG45.97 StellarXLM သို့ BitstakeXBS4.3 StellarXLM သို့ PayCoinXPY1.76 StellarXLM သို့ ProsperCoinPRC12.66 StellarXLM သို့ YbCoinYBC0.00005 StellarXLM သို့ DarkKushDANK32.35 StellarXLM သို့ GiveCoinGIVE218.34 StellarXLM သို့ KoboCoinKOBO22.99 StellarXLM သို့ DarkTokenDT0.0914 StellarXLM သို့ CETUS CoinCETI291.12
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 00:30:03 +0000.